Muuqaal:Sirta Ka Dambeysa Daneynta “Naziyiintii Jarmalka” Aayadaha Qur’aanka Kariimka Ah oo Dhawaan La Faafiyay | Baahin Media
Muuqaal:Sirta Ka Dambeysa Daneynta “Naziyiintii Jarmalka” Aayadaha Qur’aanka Kariimka Ah oo Dhawaan La Faafiyay
Mar 31, 2019 - jawaab
Joornaalka “Le Point” ee dalka Faransiiska ka soo baxa ayaa faafiyay guudmar ku aaddan buugga “Muslimiinta iyo Aaladda Dagaalka Naasiyiinta” ee uu qoray taariikhyahanka reer Ingiriis ee David Motadel.
Sida uu joornaalku sheegay, guddiga dhexe ee Ammaanka Qaranka Jarmalka ayaa codsaday in la raadiyo aayado Qur’aanka Kariimka ah ka mid ah oo ka warramaya inuu Nabi ka dambeeyo Nabi Muxammed N.N.K.H.
Sida buuggani uu qorayo, codsigaa waxaa ka dambeeyay Adolf Hitler oo sidaa u sameeyay si loo hanto quluubta dadka muslimiinta ah ee ku nool Bariga dhexe iyo Waqooyiga Afrika, si ay xulafada jarmalka garab ugu noqdaan Yuhuuddana ay lugta u mariyaan, iyadoo la maldahayo in Hitler uu “Nabi cusub yahay”.
Khubarada Naaziyiinta u qaabilsanaa bariga dhexe ayaa u sheegay Hitler in Qur’aanka Rasuul cusub uu tilmaamo ay tahay mid mustaaxiil, waa sida ay sheegayso caqiidada Islaamka, markaa kadib waxey u jeesteen dhanka aayadaha iyo axaadiista ka warrameysa in Nebi Ciise uu dib u soo noqon doono aakhiru samaanka si uu ula dagaallamo masiixu al-dijaal, isku day la doonayay in lagu qanciyo Muslimiinta in Hitler uu yahay Nabi Ciise.
In borobagaandahan la faafiyo waxey la kowsatay ciidankii Jarmalka oo uu hoggaaminyo janaral Romal oo xilligaa gaaray waqooyiga Afrika sanadkii 1941, si ay u garab istaagaan ciidankii Taliyaaniga ee Liibiya ku sugnaa, isla markaana la dagaalamayay ciidanka Ingiriiska.
Waxaa xusid mudan, in janaral Romal uu kaga adkaaday ciidanka Ingiriiska, Tunisia, Libiya illaa uu ka gaaro xuduudda Masar, halka uu gudaha u galay Saxaraha-galbeed.